Date My Pet » rudo, A Kunzwa kana chimwe Tinoita?
Last updated: Oct. 28 2020 | 3 Maminitsi verenga
Kana ukatarira shoko 'dzorudo' muduramanzwi zvinonzi dziri sezvo zvose pazita uye rechiito! Saka chii chaizvo zviri dzorudo?
Ndinogona kuyeuka shure nguva apo Ndaimbova chaizvoizvo vanorwisana vari kudanana ukama, Ndaive imwe Aimbova uye isu vachiedza 'kuponesa' ukama hwedu kufa, saka takasarudza kuti taizova 'zuva usiku' vhiki yoga. Hapana chakaipa kuti pfungwa, chokwadi ane pavhiki 'zuva usiku' chinhu ini aishingaira zvinokurudzira nemakasitoma angu kuita, Zvisinei chii Ndinorangarira pamusoro ino chaiyo ukama ndechokuti haina basa sei misi zhinji isu taenda, muchirezvana kumbobvira vakadzoka! manzwiro edu akanga achinja. Naizvozvo akaita zvachose hapana musiyano chii saka nokusingaperi sei kakawanda isu akagara mhiri tafura kubva rimwe kudanana ezvinhu, paivapo vachiri hapana dzorudo kwatiri iyi kunyanya ezvinhu.
saka, izvi zvinoenzanisira kuti haugoni kumanikidza dzorudo.
Zvinoratidza kuti unogona kuita zvinhu pamwe chete, izvo vanhu vazhinji vanotaura se 'kudanana', Zvisinei kana manzwiro seri nezviito havasi ikoko zvino zvechokwadi haafungi kudanana chaizvo zvachose, Chokwadi unogona sokuti kudhonza mazino. Wakambosangana akagara nemunhu muchiri kudanana pamusoro zvokudya panze uye chete ndisinganzwi zvakanaka? Kukurukurirana kukakanganiswa uye netsa, kana zvichida paiva kunetsana uye nemanzwiro akaipa mudenga. Kana zvakadaro hazvina basa sei kudanana marongerwe kana basa rauri kuita, hazvisi anoenzanirana kukwira 'rudo'. On the flipside Ini kunogonawo kufunga nguva apo ndakaita zvinhu nemunhu kuti chete vakanga vasina kudanana zvachose, kufanana nokufamba kuburikidza madhaka muna wellies yedu mvura, asi vachiri akanzwa da, nokuda manzwiro uye kubatana Ini kuudzawo iyeye.
Sei nezvevaya vakaroorana unoona panze pamwe chete kuti akanga zvakajeka nharo - sei kudanana ndichava manheru yavo kuva? Zvichida izvozvo zvaigona kuponeswa, kana mumwe wavo akaita chinhu kudanana kuti akamedura chando uye akaparirwa manzwiro rudo zvakare. Kutaura zvazviri regai vanoti kuti make-kukwira pabonde inogona rapisa? (Nokuti vakadzi vangu vatengi I dzinorumbidza kuenda ukama kuda kupi uye chido inopindirana, pane inopisa uye kutonhora).
Somukadzi ndinogona kutaura kuti chokwadi chokuti kana mumwe munhu anoenda refu nzira ita chinhu kudanana nokuti mukadzi wake kunoongwa zvikuru, kunyange kana zvichida mukadzi akati akanga chete kufambidzana akati murume, uye akanga asina chokwadi nezvake asi, broadly kutaura isu vakadzi kukoshesa kudanana nemasaini. Zvisinei kunyange ichi chiitiko imwe pamusoro, vasingadiwi kudanana wevaFiripi kunogona dzamira wo, saka Ndeipiko mutsetse?
Ko dzorudo zvinorevei kwauri? Zvakakodzera mumamiriro ose ezvinhu uye kana asina wadii? Zvingaita here kushandiswa kuporesa uye kugadzirisa ukama kana kuti vesa rudo uye chido? Iyi mibvunzo zvinonakidza kubvunza.
Zviri pachena nharo kumativi maviri. Ini pachangu vanoti dzorudo ari kunzwa, iyo inogona zvinounzwa chiito kana dzakatevedzana nezviito. Semuyenzaniso, kana murume wangu anoronga akanaka musi isu, uye anoenda achiedza undibudise, kana iye anoratidza kumba aine guru neboka maruva kwandiri, izvi zvichaita kuti pave nekukurukurirana kudanana mhinduro mukati mangu. Ini Uchanzwa imwe nzira uye ini vachabatsirana kuti naye. Ini vachaonga zvaakaita uye zvichaita kuti ndinzwe zvakanaka uye kunyemwerera. ichi, mukudzosa, ndichamuita anzwe zvakanaka.
Zvisinei chii chaizvo dzinonakidza kwandiri kuti isu vakadzi tine chokukura paakasika kuda isu zvose pachedu! Zvandinoreva neizvi ndechokuti kana mukadzi anodzidza chete 'kuva' kwake nyoro, zvechikadzi simba, iye anogona kunzwa kudanana, kunyange kana pasina munhu aripo. kunzwa Izvi zvinogona kuwanika vachishandisa rinopisa kugeza, makenduru, nomunhu aromatherapy kukwiza muviri, kupfeka mbatya dzakanaka uye mune dzimwe nzira dzakawanda. Saka izvi kuti vanhu okushamisira? Aihwa, kwazvo kuti zvinopesana, Ini vanoti kana mumwe mukadzi anogona kunyevenutsa uye ruzivo kunzwa da, ichi kunozarura nzvimbo yaro kukoshesa murume wake kana anoita chimwe chinhu chinowedzera kunzwa ichi.
Kana uchiziva matauriro angu nezvokudanana muchaziva kuti ndinotenda muna munhurume uye muchimiro simba mabasa mukati ukama, saka mukadzi zvechikadzi handidi kureva 'kuita' kudanana zvinhu murume wake, Zvisinei kuwana mugomba kudanana inosvika 'kunzwa' uye 'kuva', uye ipapo kugoverana kuti murume wake anogona kuva rakanaka. Asiwo unofadza pakushaiwa kwake kuva munhurume uye kufadza mukadzi wake nokuita zvinhu kwake kuti aiite afare. Kana uri mukadzi uye uchida mamwe dzorudo muukama hwako ini vanokurudzira kuedza ichi. Uye kana uri munhu uye uchida 'kuhwina' mukadzi iwe naye, kana kudzosa nekuchiva kudzokera ukama muri Parizvino muna, Ini hunoratidza 'kuita' chinhu kudanana naye, nomudzimu wechokwadi dzorudo seri zviito!